Afghanistan: Talibanka oo sii wadi doona Dagaalka kadib go’aankii Trump • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Afghanistan: Talibanka oo sii wadi doona Dagaalka kadib go’aankii Trump
September 10, 2019 - By: Khalid Yusuf
Kooxda Talibanka ee dalka Afghanistan ayaa sheegay inay sii wadi doonaan dagaalka ay kula jiraan ciidamada Maraykanka, kadib markii uu Isniintii shalay Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump sheegay inuu burburay wadahadalkii lagu doonayey in lagu joojiyo dagaalka wadanka Afghanistan ka socda 18kii sano ee lasoo dhaafay.
Maanta oo Salaasa ah ayey kooxda Talibanka sheegtay in ay sii wadi doonaan dagaalkooda, iyagoo sheegay in Maraykanka uu ka “Shalaayi” doono joojinta waan waantii socotay.
Afhayeenka Talibanka Zabihullah Mujahid ayaa sheegay in xalka dagaalka ka socda Afghanistan lagu xalin karo oo kaliya labo wado oo kala ah Dagaalka iyo Jihaad ama wadahadal iyo waan waan, wuxuuna sheegay in Maraykanka uu wadahadalka ka baxay taasina ay ka shalaayi doonaan.
Bilihii lasoo dhaafay ayuu wadahadal fool ka fool ah uga socday Talibanka iyo Maraykanka magaalada Doha ee dalka Qatar, iyadoo la filayey in wadahadaladaasi laga soo saaro heshiis Maraykanka uu ciidamadiisa kula baxayo iyo Talibanka inay joojiyaan dagaalka. Shirka ka socday Qatar ayaa ahaa mid aan lagu casumin Dowlada Afghanistan oo horey u cambaareysay inaan wax laga weydiin wadahadalka lagula jiro Talibanka.
Donald Trump ayaa si kadis ah ugu dhawaaqay labo maalin kahor in uu joojiyey kulan qarsoodi ah oo la filayey hogaanka Talibanka iyo Madaxweynaha Maraykanka ku yeeshaan xarunta Camp David ee duleedka Washington, joojinta wadahadalka ayuu Trump sabab uga dhigay weerar ay kooxda Talibanka geysatay asbuucii lasoo dhaafay, weerarkaasi oo uu ku dhintay askari u dhashay Maraykanka.
Talibanka ayaa horey u diiday in ay xabad joojin ku dhawaaqaan kahor intaan heshiiska la saxiixin qodobkaasi oo ay si weyn uga soo horjeeday Dowlada Afghanistan oo iyadu shardi uga dhigtay wadahadalada in marka hore Talibanka joojiyaan weeraradooda.
Donald Trump ayaa dhinaca kale culeys weyn kasoo fuulay dhinaca shacabkiisa kadib markii la ogaaday in Trump uu magaalada Washington ku casumay Talibanka xili dhawaan la qaban doono xuskii weeraradii 11ka September ee 2001 oo uu Maraykanka ku eedeeyo kooxda Al Qaicda oo taageero ka helaysay Talibanka.
Talibanka ayaa dhankooda ogsoon in Maraykanka uu baahi weyn u qabo inuu soo afjaro dagaalka Afghanistaan oo uu halkaasi ciidanka kala baxo, taasina ayaa keentay in illaa iyo hada Talibanka qaadacaan codsiyada Maraykanka ee ah xabad joojinta iyo in heshiis hordhac ah la galaan Xukuumada ka talisa Kabul.